It is me. Ko Niknayman.: တာဝန်ကျေပါတယ်.ဦးမြင့်သိန်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် )
တာဝန်ကျေပါတယ်.ဦးမြင့်သိန်း (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် )
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ ဈာပန အခန်းအနားကို စင်ကာပူရှိ မန်ဒိုင်း Mandai သုဿန်မှာ မတ် လ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီ ၃၀မိနစ် မိသားစုဝင်များ ဖြစ်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ သားဖြစ်သူတို့ အပါအ၀င် စင်ကာပူရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ နှင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်း အပါများ လိုက်လံ ပို့ ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ (၇)နာရီ (၁၅) မိနစ်ခန့် မှာ ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ရေခဲတိုက် မှ သယ်ဆောင် လာပြီး ဈာပနအခန်းအနားကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ ဈာပန အခန်းအနားကို စင်ကာပူရှိ သံဃာတော်များမှ သရဏဂုံတင်ပေးပြီး ပရိတ် တရား တော် များကို ကြားနာခဲ့ကြပါတယ်၊ ၄င်းနောက် စင်ကာပူရှိသံဃာတစ်ပါးမှ ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ဒီမိုကရေစီ ရေးအ တွက် စိတ်ဓါတ်နဲ့ ခံယူချက်ကို လေးစားဂုဏ်ယူကြောင်း ယခုကဲ့သို့ အသက်ဆုံးရှုံးသွားသည့် အချိန်အထိ မြန် မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးအတွက် ပြည်သူ့ တွေအပေါ်မှာနဲ့မဲဆန္ဒရှင်များအပေါ်မှာ သစ္စာရှိရှိအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် ကို စတေးခဲ့တဲ့အထိ တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့တဲ့အတွက် အထူးပဲလေးစားဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့ ပြောကြားရာမှာ ဦးမြင့်သိန်းကဲ့သို့နောင်လာနောက်သားများဟာလဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အရေး အတွက် ဆက် လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ ကို ဆရာတော်မှမှာကြားသွားပါတယ်၊ ဆရာတော် ဟောကြားသွားတဲ့အထဲမှာ ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်သိန်း အား ကောင်းရာ သုဂတိရောက်ပါစေ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုပါကြောင်း နဲ့ ၊
အကယ်၍ များ နောင်ဘ၀မှာ လူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိ တဲ့ နိုင်ငံမှာသာ လူ့ ဘ၀အဖြစ် ပြန်လည် အသက်ရှင်နိုင်ပါစေလို့အထူးဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါကြောင်းဆိုပြီး ထဲ့သွင်း ပြော ကြားသွားပါတယ်၊ ၄င်းနောက် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ၊ မွန်ပြည် နယ် အတွင်းရေးမှုး၊ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် (ကျိုက်မရောမြို့ နယ်)မှ ကွယ်လွန်သူ ဦးမြင့်သိန်း အား လေးစား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဈာပန အခန်းအနားကို တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်၍ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး ဈာပနအခန်းအနားတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် မှ အမိန့် ပြန်တမ်းကို စင်ကာပူရှိ မြန်မာ မျိုးချစ် မြန်မာမျိုးချစ် လူငယ်များ အဖွဲ့ မှ ဦးဆောင် ဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ ချုပ် ဗဟို ရဲ့ အမိန့် ပြန်တမ်း ဖတ်အပြီးမှာပဲ တက်ရောက်လာသူ အပေါင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာမကြေသီချင်းကို ၀မ်းနည်း ကြောင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် သံပြိုင် သီဆိုခဲ့ကြပါတယ်၊ ၄င်းနောက် စင်ကာပူမြန်မာမျိုးချစ်လူငယ်တစ်ဦးမှ ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးမှာ စင်ကာပူရောက် ဒီမိုကရေစီ လိုလားသူများမှ မြန်မာပြည်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုက ရေစီပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားကြဖို့ဈာပနအခန်းအနား တက်ရောက်လာသူများကို တိုက်တွန်း သွားပါတယ်၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သားဖြစ်သူ ကိုအောင်သူရ မှ ဖခင်ဖြစ်သူအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီ ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူအပေါင်းနဲ့ ဈာပနအခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာသော ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သား များအားလုံးကို အထူး ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကွယ်လွန်သူဦးမြင့်သိန်းရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို လွမ်းခြုံထားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အ လံကို စင်ကာပူ မျိုးချစ်မြန်မာများ အဖွဲ့ သားများမှ သားဖြစ်သူ ကိုအောင်သူရကိုပေးအပ်လိုက်ပြီး ဦးမြင့် သိန်း ၏ ရုပ်ကလပ်ကို မီးသင်္ဂြိုလ်စက်သို့ သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးမြင့်သိန်း ရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို မီးသင်္ဂြိုလ် နေချိန်မှာ ကမ္ဘာမကြေဘူး ဆိုတဲ့ ၈၈ အရေးအခင်းမှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုပြီး ၀မ်း နည်း မျက်ရည်များဖြင့် တက်ရောက်လာသူများ ငိုကြွေးရင်းသီဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဈာပနတက်ရောက်လာသူများကို ယပ် တောင်များနှင့် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးသားတဲ့ တကယ်မသေခင် အစမ်း သေကြည့်ကြရအောင် ဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ အနှိုင်းမဲ့အဖေါ် စာအုပ်တို့ ကို ဓမ္မလက်ဆောင် အဖြစ်ဖြန့် ဝေခဲ့ပါတယ်။ လာမည့် ဧပြီလ (၃)ရက်နေ့ကြာ သာ ပတေးနေ့နေ့ လည် (၁၁)နာရီမှာတော့ တိုပါးရိုး မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ရက်လည် ဆွမ်း ကပ်တရား နာ ပြုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှ ဖိတ်ကြားထားကြောင်း သတင်း ရရှိပါ တယ်။
Posted by အာဇာနည် at 11:15 AM